Ugu horayn Sidda aynu wada ogsoonahay ama caqliga saliimka ahi Ino sheegayo ee ah inaynu u mahadd naqno amma mudnaan Gooniya Siino cidd kasta oo wax-qabad muujisa amma wax ku soo Kordhisa Bullsho ahaan, qaran ahaan, waddan-aha...
Khilaafku waa qayb ka mid ah abbuurka bani’aadamka tan iyo intii dunidda ALLE keenay aabaheen Aadam; isaga meesha lagama saari karo si dhamaystiran, se qaabka ugu weyn ee looga gaashaaman karo dhibkiisu waa in la helo shuruuc iy...
Afartaas kalmadood ee cinwaanka ku sheegan hadii aad si fiican u dhadhamiso, waxa kuu soo baxaaya meelo badan oo ay afartaasi iska soo galaan, amaba qaraabo/ehel ka yihiin. Eeg, Kenya iyo dadkeedu aad iyo aad ayaa ay u walwalsanyi...
Bishii ugu dambaysay 2016kii waxa Gaambiya ka dhacay doorasho ay ku tartamayeen Kali-taliyihii dalkaas u arriminayey 20 sanno Yahya Jammeh iyo guddoomiyihii mucaaradka Aadama Barrow. Waxa doorashadaas ku guulaystay Aadama Barrow, ...
Waxaa igu kallifay maanta in aan maqaalkan qoro oo aan Qalinka u qaatto Markaan arkay wada haddallkii Khaatumo iyo somaliland halkay marayso iyo saamaynta iyo raadka ay ku yeellandonto qarrankan ama Taariikhda madaxw...
Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa bulshada Somaliland meelkasta oo ay joogaan mudanayaal iyo marwooyinba , waxa kale oo aan si gaar ah u salaamayaa bahda saxaafaddda qaybaheeda kala duwan ee hadh iyo habeenba na soo gaadhsiiya ...
Asalamu Calaykum Waraxmatulahi Wabarakato, Marka Hore Waxa Aan Salaamayaa Dhammaan Hawl-Wadeenada Warbaahinta Xorta Ah Ee Reer Somaliland Iyo Akhristayaasha Sharafta Mudan Bacdal Salaan, Waxa Qalinka Igu Kalifay Maanta Inaan Qalin...
Sooraan Oo Heesaya “Wuxu Waa Aduunyoo Ruuxba Mar Soo Joog”
Halkan hoose kaga bogo heestaas oo aad u macaan https://www.youtube.com/watch?v=cNy4lxXJkNU...
Buuggan magaciisu dusha ku xusan yahay baa ka mid ahaa dhawr buug oo hadiyad ahaan magaalada Hargeysa la iiga soo direy. Kolkii aan akhriyeyna, waxaan jeclaaday inaan wixii iiga baxay la wadaago akhristayaasha xiiseeya kala-dhigdh...
Dimuqraadiyadda Somaliland haatan waa qaan-gaadh marka laga soo bilaabo 31kii May 2001 oo ahayd maalintii la meel mariyey Dastuurka Somaliland ee suurto galiyey nidaanka xisbiyada badan. Waxayse qaangaadhay iyada oo wali foolxun, ...